Modafinil: कहाँ उच्च गुणवत्ता मोडाफिनिल पाउडर किन्न को लागी | AASRO पाउडर
/ब्लग/modafinil/Modafinil: कहाँ उच्च गुणवत्ता मोडाफिनिल पाउडर किन्न
प्रकाशित 10 / 29 / 2017 by Dr. Patrick Young मा लेखियो modafinil. यो संग7टिप्पणिहरु.
Modafinil: कहाँ उच्च गुणवत्ता Modafinil कच्चा पाउडर खरीद गर्न
Modafinil एक नुस्खा औषधिको लागि दबाइ दबाइ हो जसले सतर्कता बढाउँछ र नींदलाई रोक्छ। यो केवल सिग्नल र मेमोरी पनि वृद्धि गर्न हुन्छ, र नोट्रोपिक्स को वर्ग मा एक शक्तिशाली र अत्यधिक माना पूरक हो।
कस्तो मोडफिनिल काम गर्दछ वृद्धिआईएनजी तिम्रो दिमाग र मूड?
केही स्मार्ट ड्रग्सको विपरीत, ब्याक अप को राम्रो सौदा छ मोडफिनिल को प्रभाव.
यो थकानमा आफ्नो प्रतिरोध बढाउन र आफ्नो मूड सुधार गर्न देखाइएको छ।
स्वस्थ वयस्कों मा, modafinil "थकान को स्तर, प्रेरणा, प्रतिक्रिया समय र सतर्कता मा सुधार।"
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन मा मोडफिनिल "आवेग प्रतिक्रिया" लाई कम गर्न मा प्रभावी हुन को लागी, यानी बुरा निर्णय।
मोडफिनिलले पनि नींद बेचेको डाक्टरहरूमा मस्तिष्कको कार्यलाई सुधार गर्दछ।
त्यहाँ केही प्रमाणहरू छन् मोडाफिनिलले मात्र नि: शुल्क आईक्यूको साथमा मद्दत गर्दछ, तर प्रयोगका वर्षहरू पछि, यसले त्यो तरिका महसुस गर्दैन।
यो कस्तो छ Modafinil उत्तम लिईयो?
तपाईंको डाक्टरले आदेश दिएको रूपमा मोडफिनिल प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई दिइएको सबै जानकारी पढ्नुहोस्। नजिकका सबै निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस्।
खाना वा बिना लिनुहोस्।
शिफ्ट कार्य सुत्न समस्या: कार्यको सुरुवात अघि 1 घण्टा लिनुहोस्।
Narcolepsy र नींद apnea: बिहान यो औषधि लिनुहोस्।
एक मिस्ड डोज लिनुहोस् जसरी तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ।
यदि यो निस्क्रिय समय नजिक छ भने, मिस गरिएको खुसी छोड्नुहोस् र तपाईंको सामान्य समयमा फर्कनुहोस्।
2 खुट्टाहरू एकै समयमा वा थप खुट्टाहरूमा नराख्नुहोस्।
कहाँ to buy उच्च गुणस्तर Modafinil?
कसरी सम्झना सबैलाई सम्झनुहोस् अनलाइन मोडफिनिल भारतबाट मुक्ति गरिन्छ?
यसको मतलब छ कि अधिकांश मोडफिनिल ई - वाणिज्य साइटहरु द्वारा प्रदान गरिएको उत्पादनहरु अप्रचलित हो। सबै ईकमर्स वेबसाइटहरू एकै उत्पादनमा ड्रपशिप गर्दै छन्!
त्यसोभए जब तपाई विक्रेताको मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई उत्पाद गुणसँग चिन्तित हुनुहुन्न (किनकि तिनीहरूले बेच्ने उत्पादन समान छन्)। यद्यपि, तपाईं सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि विक्रेता विश्वसनीय छ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको अर्डर रिफर्मद्वारा हिरासतमा छ भने, विक्रेताले ग्राहक समर्थन मार्फत उत्तरदायी हुनेछ? के केहि योजना बनाइएन भने तिनीहरू नि: शुल्क प्रतिस्थापन प्रस्ताव गर्छन्?
त्यहाँ मूलतः छन् विश्वसनीय मोडफिनिल बिक्रेता अहिलेसम्म दृश्यमा .यो चीनबाट एएसआरएवा हो।
AASRAW द्वारा Modafinil कच्चा पाउडर सबै भन्दा पछि लागे पछि, बजार मा सबै भन्दा सस्ती र उच्चतम गुणवत्ता मोडफिनिल। AASRAW वर्तमानमा सबैभन्दा राम्रो बिक्री मोडफिनिल कच्चा पाउडर ब्रान्ड अनलाइन छ जसले हजारौं प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको क्षमताको बारेमा उठाउँछ। मेडाफिनिल एक इ्युगोरोनिक वा सरल नियम हो, एजेन्सीलाई बढाउने जागरण। मोडफिनिलको प्रभावले जागृति, संज्ञानात्मक वृद्धि, मूड वृद्धि, सतर्कता र केहि अवस्थामा हल्का उत्साहमा समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ आफ्नो जेबमा एक छेद जलाउन गुणस्तर चाहानुहुन्छ भने, अबसर पाउडर किन्नुहोस्!
मोडाफिनिल पाउडर किन्नुहोस्: तपाईले थाहा पाउनु भएको एक बिक्रि स्मार्ट बिक्रि!
के वास्तवमा यो मोडफिनिलले मस्तिष्कलाई राम्रोसँग बढाएर राम्रो बनाउने काम गरिरहेको छ?
Modafinil: म कसरि Modafinil पाउडर लेनी चाहिए?
7 प्रतिक्रिया टिप्पणिहरु
किमबली होरोकक्स09 / 15 / 2018 मा 7: 52 बजे
म 10grams को Modafinil (नोट्रोपिक्स) पाउडर किन्न चाहन्छु
Dr. Patrick Young06 / 12 / 2018 मा 3: 18 ए.सी.
ठीक छ, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ http://www.aasraw.com/contact/ हामीलाई सम्पर्क गर्न।
Cerah06 / 11 / 2018 मा 3: 24 बजे
म कसरी भाइरुरामिन र मोडफिनिल जस्तै यहाँ समीक्षा गरेको औषधि किन्न सक्छु? तिनीहरूले पनि एक साथ लिइएका छन्?
Dr. Patrick Young04 / 26 / 2018 मा 8: 36 बजे
उच्च गुणस्तर: जसो हामीले प्रतिज्ञा गरेका थियौं, शुद्धता संग हाम्रो सबै सामानहरू 98% भन्दा कम।
Tyyler Orrrick04 / 26 / 2018 मा 6: 53 ए.सी.
म पाउडर फारममा मूल्य निर्धारण गर्न चाहन्छु LGD-4033, YK-11, Modafinil, GW-501506, MK-2866, and MK-677। धन्यवाद।
Dr. Patrick Young03 / 09 / 2018 मा 8: 42 बजे
0k, हामी तपाईंलाई 8 घण्टा भित्र फिर्ता पुर्याउनेछौं
केली एन्डरसन03 / 09 / 2018 मा 7: 13 ए.सी.
मलाई स्रोत मोडफिनिल पाउडर चाहिन्छ
कहाँ उच्च शुद्धता stanozolol पाउडर खरीद गर्न?	Modafinil: म कसरि Modafinil पाउडर लेनी चाहिए?